Ciidanka AMISOM oo madaafic ku garaacay degmooyin ka tirsan Shabeelaha Hoose – Radio Daljir
Ciidanka AMISOM oo madaafic ku garaacay degmooyin ka tirsan Shabeelaha Hoose
Maajo 20, 2020 6:44 b 2
Guddoomiyaha deegaanka Shalan-bood Nuur Cismaan Raagge ayaa sheegay in Ciidanka AMISOM ay madaafiic ku garaaceen xaafado ka tirsan deegaankaas oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa uu sheegay in xalay Ciidamada AMISOM ay duqeeyeen xaafado shacab degan yihiin, kaddib markii qarax miino lala eegtay kolonyo ay wateen.
Sidoo kale Guddoomiyaha oo wareysi siiyay idaacada Kulmiye ayaa sheegay in aanay ogeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas, balse saaka ay ku bixi doonaan xaafadihii madaafiicda ku dhacday, si ay u soo qiimeeyaan.
Deegaanka Shalanbood ayaa ka mid ah deegaanada ay gacanta ciidamada dowladda, isla markaana ay duleedka deegaankaas ay saldhig ku leeyihiin Ciidamada AMISOM.
Sahal 4 months ago
“Daljir ha iska saxaan af Soomaaliga amase xooglayiig ha ka noqonina. Waa la dhihi karaa tuulooyin/magaalooyin/degmooyin ka tirsan shabeellaha hoose, laakiinse waa khalad in la yiraahdo xaafado ka tirsan shabeellaha hoose, shabeellaha hoose ma magaalaa mise waa gobol?”
Sharif 4 months ago
Daljir ha iska saxaan af Soomaaliga amase xooglayiig ha ka noqonina luuqadda “don’t be lazy on language”, Waa la dhihi karaa tuulooyin/magaalooyin/degmooyin ka tirsan shabeellaha hoose, laakiinse waa khalad in la yiraahdo xaafado ka tirsan shabeellaha hoose, shabeellaha hoose ma magaalaa mise waa gobol?